Nato oo ‘maalin qura 10 jeer’ hor istaagtay diyaarado uu Ruushku leeyahay (Maxaa soconaya?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Nato oo ‘maalin qura 10 jeer’ hor istaagtay diyaarado uu Ruushku leeyahay...
Nato oo ‘maalin qura 10 jeer’ hor istaagtay diyaarado uu Ruushku leeyahay (Maxaa soconaya?)
(Hadalsame) 31 Maarso 2021 – Diyaaradaha Gaashaanbuurta Nato ayaa Isniintii kala orodgalay 10 jeer muddo lix saacadood gudahood ah si ay uga jawaabaan “sare ukac aan caadi ahayn” oo diyaaradaha Ruushka ay ku dulmareen dhowr aag, isbahaysiga milateri ee reer Galbeedka ayaa Talaadadii sheegay.
Waxa ay dhexda u galeen diyaarado marayay meel u dhaw saldhigyada milateri ee gaashaanbuurtu ay ku leeyihiin yihiin North Atlantic, North Sea, Baltic iyo Black Sea, Nato ayaa tiri.
Wax jawaab ah oo degdeg ah oo ka soo baxay Ruushka ma ay jirto, dalkaas oo dhawaan Nato ku eedeeyay inay qaadday dhabbihii iska hor imaadka.
Xoghayaha Guud ee Gaashaanbuurta Nato ayaa Moscow ugu baaqay inay dib u bilowdo wadahadallada.
Baaqa todobaadkii hore uu jeediyay Jens Stoltenberg ayaa waxaa baritaaray Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee waddanka Mareykanka Antony Blinken, kaas oo booqasho ku maraya xarunta dhexe ee gaashaanbuurta ee magaalada Brussels, markii uu soo jeediyay “xiriirka Ruushka waa inuu ugu yaraan noqdaa mid la saadaalin karo oo deggan”.
Sida ay Nato sheegtay, walow aanay diyaaradaha milateriga Ruushka aanay soo gelin hawada dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga haddana ma aanay soo dirin farriimaha la wadaago markii ay diyaaraduhu gooshayaan, marka taasi waxa ay halis ku keeni kartaa duulimaadyada rayidka ah. Gaashaanbuurtu waxa ay sheegtay in is-hortaagga lagu sameeyay lix kooxood oo diyaraadaha Ruushka ah:
Diyaaradaha Norway ee F-16 ayaa kala orodgalay markii laba diyaaradood oo nooca Tu-95 ay soo agmareen meel u dhaw xeebta Norway
Diyaaradaha Ruushka ayaa markaa kaddib waxa ay u duuleen dhinacaas iyo koonfurta iyagoo dulmaray badda North Sea taas oo qasab ka dhigtay in diyaaradaha ciidammada cirka ee UK iyo Belgian-ka ay tallaaba qaadaan
Labada diyaaradood oo nooca Tu-160 Blackjack ee wax duqeeya ayaa mar dambe waxaa hor istaagay ciidammada cirka ee Norway
Diyaaradaha isbahaysiga ayaa sidoo kale waxa ay dabagaleen saddex diyaaradood oo uu Ruushku dulmarsiiyay badda Black Sea
Diyaarad Ruushka uu leeyahay oo ku jirtay roondo dhanka badda ah ayaa waxaa badda Baltic Sea oo u dhaw Kaliningrad ku hor istaagay diyaaradaha Talyaaniga.
Xiriirka ka dhaxeeya Moscow iyo Nato ayaa xumaaday 2014-kii markii Ruusha uu Ukraine ka qabsaday Crimea halka fallaagada uu baritaaro Ruushka ay iyana la wareegeen deegaanno ka tirsan bariga Ukraine.
Waxaa sidoo kale xiriirkii sii xumeeyey muran ka dhashay dhuumaha gaaska Ruushka ka soo qaada ee taga Jarmalka kuwaas oo uu ka soo horjeestay Mareykanka. Mr Blinken ayaa waxa uu ka digay in shirkaddii mashruucaas ku lugyeelata ay halis ugu jirto cunaqabatayn uu Mareykanku ku soo rogo.
Xoghayaha Guud ee Gaashaanbuurta Nato, Jens Stoltenberg, ayaa waxa uu todobaadkii tegay ugu baaqay Ruushka inuu dib u bilaabo wadahadalladii u dhaxeeyay madasha Golaha Nato-Ruushka, kuwaas oo aanan kulmin tan iyo 2019-kii. Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Alexander Grushko ayaa sheegay in Nato ay ka tanaasuliwaysay habdhaqanka ah in Ruushka ay u aragto “halis uga imanaysa Bariga”.
Dhanka kale, xabbad joojin Ukraine lagu gaaray 2020, taasa oo aan xubin ka ahayn Nato, ayuu culays badan soo foodsaaray iyadoo labada dhinac uu midba midka kale ku eedaynayo sare u kaca qulqulatooyinka. Taliyaha ciidammada qalabka sida ee Ukraine, Ruslan Khomchak, ayaa waxa uu Ruushka ku eedeeyay inuu ku hayo “siyaasad daandaansi ah” iyadoo ciidamada Ruushka la keenayo meel u dhaw xadka Ukraine kala dhaxeeya.
Previous article”Somalia waa ogayd waana naga qarisay in nala soo weerari rabo!” – Kenya oo Somalia ku eedaysay inay ogayd weerarkii Ceel Cadde
Next articleAstaanta cusub ee Inter Milan oo ”khalad” wayn laga soo saaray & taageerayaasha oo ku maadsanaya